China Plastic ọgwụ Ebu Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic injection ebu bụ akụrụngwa maka imepụta ngwaahịa plastik, nke a na-ejikarị eme ihe maka imepụta igwe. Ọgwụ ebu nwere ike inye zuru ezu Ọdịdị na ezi size maka plastic ngwaahịa conveniently na ngwa ngwa.
Gịnị bụ ebu ọgwụ plastik
Plastic injection ebu(injection ebu) bụ ụdị ngwá na-emepụta plastic ngwaahịa, na kwa a ngwá ọrụ na-enye plastic ngwaahịa zuru ezu Ọdịdị na ezi size. Ọgwụ na ịkpụzi bụ ụdị nke nhazi usoro eji uka mmepụta nke ụfọdụ mgbagwoju akụkụ. Kpọmkwem, plastic agbaze site okpomọkụ na-agbara n'ime ebu oghere site na ọgwụ na ịkpụzi igwe n'okpuru nnukwu nsogbu, na mgbe mma ma sie ike iji nweta kpụrụ ngwaahịa.
Njirimara nke ntanye ebu
1. Injection ebu nwere ike ịbụ akụkụ plastik nwere usoro dị mgbagwoju anya, ogo ziri ezi na mma dị mma n'otu oge.
2.Ọ bụ ezie na ihe owuwu nke plastic ebu nwere ike ịdị iche nke ukwuu n'ihi ụdị dịgasị iche iche na arụmọrụ nke plastik, ọdịdị na nhazi nke ngwaahịa plastik na ụdị nke igwe ọgwụ, usoro ihe eji eme ihe bụ otu. The ebu na tumadi ekewet agbapụtara usoro, okpomọkụ inye usoro, akpụ akụkụ na bughi akụkụ. Usoro ịwụsị mmiri na akụkụ ịkpụzi bụ akụkụ nke na-akpakọrịta kpọmkwem na plastik ma gbanwee ya na plastik na ngwaahịa. Ha bụ ihe kachasị dị mgbagwoju anya ma na-agbanwe agbanwe na nkedo plastik, nke chọrọ nhazi kachasị elu na nkenke.
Ngwakọta nke ọgwụ ebu
Ọkpụkpụ akpụ a na-eme ya bụ nke ihe na-akpụ akpụ na akpụ akpụ. A na-arụzi akpụ akpụ akpụ akpụ na ndegharị akpụ akpụ nke igwe na-akpụzi ọgwụ, na etinyere ebu ahụ ka etinyere na ndebiri ndebiri nke igwe ọgwụ na-akpụ akpụ. N'oge ịkpụzi ọgwụ ahụ, a na-emechi ebu na-agbanwe agbanwe na ebu ahụ edozi iji mepụta usoro agbapụtara na oghere ebu. Mgbe ebu meghere, ibughari ebu na ofu ebu na-iche iji wepụ plastic ngwaahịa. Iji belata oke ọrụ nke ebu na imepụta ihe, otutu ihe eji ebu ihe eji eji ihe eji eme ihe.
Ofdị nke ebu dika iji njirimara eji eme ihe
(1) Ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ
Site n'enyemaka nke ngwaọrụ kpo oku, plastik dị na sistemụ wụsa agaghị eme ka ọ sie ike, agaghịkwa emebi ngwaahịa ahụ, ya mere a na-akpọkwa ya onye na-agba ọsọ. Uru: 1) Ọ dịghị ihe mkpofu 2) nwere ike belata nrụgide ntụtụ, nwere ike iji ebu otutu ọtụtụ 3) nwere ike belata usoro ịkpụzi 4) meziwanye ngwaahịa nke ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka njirimara na-agba ọsọ ọkụ: 5) plastik na-agbaze okpomọkụ dị oke. Ọ nwere ezigbo fluidity na ala okpomọkụ na ezi kwes kwụsie ike na elu okpomọkụ. 6) Ọ na-enwe mmetụta nke nrụgide ma ghara ịfefe na-enweghị nrụgide, mana ọ nwere ike ịfe mgbe a na-etinye nrụgide. 7) Ezigbo ọkụ a kapịrị ọnụ, ka ịjụ oyi ngwa ngwa na ọnwụ. Plastic dị maka ndị na-ekpo ọkụ ọkụ bụ PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. E nwere ụdị abụọ dị iche iche na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ ọsọ: 1) kpo oku runner mode 2) adiabatic runner mode.
(2) Ọkpụkpụ siri ike
Igwe nchara eji arụ ọrụ n'ime ọnwụ dị mkpa ọgwụgwọ ọgwụgwọ mgbe ịzụrụ, dị ka quenching na carburizing, iji mezuo ihe eji eme ihe. A na-akpọ ụdị ọgwụ ahụ dị ka ịnwụ anwụ. Iji maa atụ, ọnwụ dị n’ime ya na-anabata ígwè H13, ígwè 420 na igwe S7.
(3) Ebu nro (n'okpuru 44HRC)
Nchara eji arụ ọrụ n'ime nwere ike izute ihe eji eme ihe na-enweghị ọgwụgwọ okpomọkụ mgbe ịzụrụ. A na-akpọ ọgwụ ahụ dị nro dị nro. Ọ bụrụ na ime ọnwụ bụ nke P20 ígwè, opi nchara, 420 nchara, NAK80, aluminom na beryllium ọla kọpa.
(4) Ugboro abụọ na-akpụgharị ebu
Ihe nkedo abuo abuo bu ihe nkedo nke eji etinye ihe abuo abuo na igwe ogwu a na-acho ya okpukpu abuo, ma a na-eweputa ihe a ozugbo. N'ozuzu, a na-akpọkwa usoro a na-akpụzi akụrụngwa abụọ, nke a na-ejikarị setịpụrụ akpụzi nke a na-achọkarị ma chọọ igwe pụrụ iche nkedo ịkpụzi abụọ.
(5) Ọgwụ na ịkpụzi na na-ebu mma & na-ebu labeling
Ihe nkedo plastik na-edozi site na sistemụ gating
Enwere ike ịkekọrịta ihe eji akpụ akpụ plasta ụzọ atọ dị ka ụdị usoro gating dị iche iche.
(1) Edge n'ọnụ ụzọ ámá ebu (abụọ efere ebu): agba ọsọ na ọnụ ụzọ ámá na-demoulded ọnụ na ngwaahịa na nkewa akara. Nhazi ahụ bụ nke kachasị mfe, dị mfe ịhazi, ọnụ ahịa ya dịkwa ala. Ya mere, ọtụtụ ndị na-eji nnukwu nozulu usoro iji rụọ ọrụ. A na-ekewa ihe owuwu nke plastik na uzo abuo: ihe na-agbanwe agbanwe na ihe edozi. The ibughari akụkụ nke ogwu ogbugba bụ ibughari akụkụ (ukwuu n'ime ndị ejection n'akụkụ), na-arụ ọrụ na ejection ọgwụgwụ nke ọgwụ igwe na-akpọkarị gwara ido. N'ihi na akụkụ ahụ etinyere nke nnukwu nozulu na-anwụkarị ka ọ bụ mbadamba ígwè abụọ, a na-akpọkwa ya mpempe akwụkwọ mbadamba. Mbadamba efere abụọ ahụ bụ usoro dị mfe nke nnukwu nozulu ebu.
(2) Pin-ebe ọnụ ụzọ ámá ebu (atọ efere ebu): ndị na-agba ọsọ na ọnụ ụzọ ámá ndị na-enweghị nkewa akara, n'ozuzu na na ngwaahịa, n'ihi ya, ọ bụ ihe mgbagwoju chepụta a otu nozulu nkera akara, na ike hazie . A na-ahọrọ usoro zuru oke dị ka ngwaahịa chọrọ. The ofu akụkụ nke ezi nozulu molg na-adịkarị mejupụtara atọ ígwè efere, n'ihi ya, ọ na-akpọ "atọ efere ebu" n'ihi na ụdị a nke bughi anwụ. Mpempe akwụkwọ mpịakọta atọ bụ usoro dị mfe nke sọfụfụ dị mma.
(3) Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ: Ọdịdị nke ụdị anwụ a bụ isi otu ihe ahụ. Nnukwu ihe dị iche bụ na onye na-agba ọsọ dị na otu ma ọ bụ karịa ọkụ na-agba ọsọ ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na-enwe okpomọkụ mgbe niile. E nweghị ihe oyi demoulding na ndị na-agba ọsọ na ọnụ ụzọ ámá bụ ozugbo na ngwaahịa. Ya mere, ndị na-agba ọsọ adịghị mkpa demoulding. A na-akpọkwa usoro a enweghị usoro nozulu, nke nwere ike ịchekwa akụrụngwa ma ọ bara uru. N'ihe banyere ihe ndị dị oke ọnụ na ihe ndị dị elu maka ngwaahịa, ọ na-esiri ike ịmepụta na usoro, ọnụahịa nke ọnwụ na ebu dị elu. Ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ, a makwaara dị ka sistemụ ọkụ na-ekpo ọkụ, ọkachasị mejupụtara ya na onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ, efere ọkụ ọkụ na akara igwe na-ekpo ọkụ. Usoro ọsọ anyị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ụdị abụọ: otu-na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ na multi-point hot runner. Otu ebe ọnụ ụzọ ámá dị ọkụ bụ ịgbanye plastik a wụrụ awụ kpọmkwem n'ime oghere site na aka uwe ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ, nke kwesịrị ekwesị maka otu oghere na otu ọnụ ụzọ plastik ebu; ọnụ ọgụgụ dị ọkụ ọnụ ụzọ ga-eke ihe a wụrụ awụ n'ime alaka ụlọ ọrụ ọ bụla nke ọnụ ụzọ ámá site na efere ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ wee banye n'ime oghere. Okwesiri maka otu oghere, nri otutu otutu na oghere
Ngwa nke ihe eji akpụ plastik
Ọgwụ ebu bụ ihe dị mkpa usoro akụrụngwa maka mmepụta nke dị iche iche ulo oru ngwaahịa. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ plastik na nkwalite na ntinye nke ngwaahịa plastik na mpaghara ndị ọrụ mmepụta ihe dị ka ụgbọelu, ụgbọelu, elektrọnik, igwe, ụgbọ mmiri na ụgbọ ala, ihe ndị chọrọ na ngwaahịa ndị ahụ na-adịkwa elu. Omenala ebu usoro imewebeghi ike iru ihe achọrọ taa. E jiri ya tụnyere ọdịdị ọdịnala ọdịnala, imepụta teknụzụ CAE nwere kọmpụta nwere nnukwu uru iji meziwanye arụpụta ọrụ, na-eme ka ogo ngwaahịa dị mma, belata mbenata ma belata ike ọrụ.
1. Electronic na nkwukọrịta ngwaahịa:
2. Ngwaọrụ Office;
3. Akpaaka moto;
4. Ngwa ụlọ;
6. Nlekọta ahụike na gburugburu ebe obibi;
7. Industriallọ ọrụ mmepụta ihe;
8.Amara ọgụgụ isi;
9. gbọ njem;
10. Ihe eji ewu ulo, kichin na igwe mposi na ngwa oru
Mestech bụ ọkachamara na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ịmịnye ọgwụ na ịmịnye ọgwụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20. Anyị nwere ndị ọrụ injinia magburu onwe ha na ahụmịhe na-arụpụta ọgaranya. Anyị nwere ike chepụta na-emepụta elu-edu plastic injection ebu maka ndị ahịa anyị. Ndị na-akpụzi anyị na-ekpuchi eletriki, eletriki, ụgbọ ala, ahụike, njem na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Die casting ebu
Osote: Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ